Diclofenac ဒိုင်ကလိုဖင်းနစ် အနာသက်သာဆေး (၃) - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
Diclofenac ဒိုင်ကလိုဖင်းနစ် အနာသက်သာဆေး (၃)
မင်္ဂလာပါဆရာ။ ကျမ အသက်က ၃၂ နှစ်ပါ။ မျိုးရိုးလိုက်အဝလွန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငယ်ငယ်ကတည်းက အမြဲအစားထိန်း ပြီး ပိန်ဆေးတွေလည်းတော်တော်စုံအောင်သောက်ခဲ့တဲ့အပြင် ထိုးဆေးပါထိုးခဲ့ဖူးပါတယ်။ အစာအိမ်တော့မဖြစ်ဖူးပါဘူး။ အခုကျမ အစားလျှော့တဲ့ diet plan လုပ်နေတဲ့အချိန်အတွင်း တခါတလေ ညစာ နောက်ကျစားမိတာတို အပြင်အစားအစာတွေစားမိတဲ့အခါ ကျောရင်ခေါင်းတအား ညှပ်ပြီးအောင့်ပါတယ်။ အောင့်ရင်လည်းတစက္ကန့်တောင် နာကျင်ှုမရပ်ပဲ ဆုတ်ထားသလို အရမ်းကို နာကျင်ခံစားရပါတယ်။ ကျမအစာအိမ်ဆရာဝန့်ပြပြီး ဆောသောက်ပေမယ့် ခဏပဲသက်သာပြီး ခဏခဏပြန်ဖြစ် ဆေးဘယ်လောက်သောက်သောက် မသက်သာပါဘူး။ အရမ်းနာကျင်တာ မခံစားနိုင်လို့ ဆေးခန်းပြေး ချက်ချင်းဆေးထိုးမှသက်သာပါတယ်။ နောက်အနာသက်သာဆေး diclo denk 100 ခဏခဏထည့်ရပါတယ်ဆရာ။ အဲဆေးတောင့် ခဏခဏသုံးတာအန္တရာယ်ရှိပါသလားဆရာ။ အစာအိမ်နာတာ အမြန်သက်သာဆေးလေးရှိရင် ညွှန်ပေးပါဆရာ။ဆေးခန်းကဝေးလို့ ညသန်းခေါင်နာရီ သုံးလို့ရအောင်ပါဆရာ။ အစာအိမ်ကပျောက်ပြီထင်လိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်မို့ ခုဆို ၆လလောက်ရှိပါပြီဆရာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
ဆောရီး။ ပိန်ဆေးတွေရဲ့ ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုတွေအကြောင်း ခဏခဏတင်ပါတယ်။ လေနာ ခေါ် အစာအိမ်နာ ဟုတ် မဟုတ်တော့ မသိပါ။ စာတွေအားလုံး ဘလော့မှာဖတ်လိုက ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
• Baschi Pink Quick Slimming ပိန်ဆေးကြော်ငြာ http://doctortintswe.blogspot.com/…/baschi-pink-quick-slimm…
• Baschi ပိန်ဆေး ဆက်ရေးခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2017/05/baschi.html
• Bleeding Peptic Ulcer အစာအိမ်နာ သွေးယိုခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/…/bleeding-peptic-ulcer_2…
• Orlistat ပိန်ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/10/orlistat.html
• Peptic Ulcer Diagnosis လေနာရောဂါကို ဆေးစစ်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/…/peptic-ulcer-diagnosis_…
• Peptic ulcer လေနာဆိုတာ ဘုရင်မှာလည်း ဖြစ်သည် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/peptic-ulcer.html
• Weight loss ပိန်ချင်သလား http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/weight-loss.html
Diclofenac (ဒိုင်ကလိုဖင်းနစ်) ဆေးဟာ ရောင်တာ၊ ဖျားတာနဲ့ နာတာကိုသက်သာစေတဲ့ NSAID အမျိုးအစား အနာသက်သာဆေးဖြစ်တယ်။ ဒီအုပ်စုထဲမှာ ဆေးအမျိုးမျိုးပါတယ်။ Acetic acid derivatives အုပ်စုခွဲထဲကဖြစ်တယ်။ သတိထားဘို့က FDA ကနေ စိတ်ချရမှုကို သတိပေးထားတယ်။ ထိုးဆေး၊ စားဆေး၊ ဆေးရည်နဲ့ လိမ်းဆေးတွေအနေနဲ့ လာတယ်။ လိမ်းဆေးက ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းစေတယ်လို့ သုတေသနတခုကဆိုပါတယ်။ ဘလော့ခ်မှာ တင်ထားပါတယ်။
Diclofenac (ဒိုင်ကလိုဖင်းနစ်) ဆေးဟာ ရောင်တာ၊ ဖျားတာနဲ့ နာတာကိုသက်သာစေမယ်။
Diclofenac 35-50 mg တနေ့ ၂-၃ ကြိမ်။ (သို့) 75 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်။ 100 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်။
Ankylosing Spondylitis အဆစ်ခိုင်နာခြင်း
Diclofenac 25 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်။
Diclofenac 50 mg တနေ့ ၃ ကြိမ်။
Rheumatoid Arthritis ရူမတွိုက်အဆစ်နာခြင်း
Diclofenac 50 mg တနေ့ ၃-၄ ကြိမ်။
Diclofenac 50 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်။
1. Bleeding Peptic Ulcer အစာအိမ်နာ သွေးယိုခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/…/bleeding-peptic-ulcer_2…
2. Narcotic Analgesics မူးယစ်ဆေးပါ အနာသက်သောဆေးများ http://doctortintswe.blogspot.com/…/narcotic-analgesics.html
3. Narcotic Pain Medications ဘိန်းပါတဲ့ အနာသက်သာဆေး အပြင်းစားများ http://doctortintswe.blogspot.com/…/narcotic-pain-medicatio…
6. NSAIDs (2) အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေကို လေ့လာခြင်း http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2011/11/nsaid.html
7. NSAIDs သတိပေးချက်ထုတ်လိုက် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/nsaids.html…
8. Painkillers (1) အနာသက်သာဆေးများ (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/painkillers-1.html
9. Painkillers (2) အနာသက်သာဆေးများ (၂) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/painkillers-2.html
10. Paracetamol combo drugs (ပါရာစီတမော) ပူးတွဲဆေး သတိပေးချက် http://doctortintswe.blogspot.com/…/paracetamol-combo-drugs…
11. Peptic Ulcer Diagnosis လေနာရောဂါကို ဆေးစစ်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/…/peptic-ulcer-diagnosis_…
12. Peptic ulcer လေနာဆိုတာ ဘုရင်မှာလည်းဖြစ်သည် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/peptic-ulcer.html